ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ကိုထင်လင်းအောင် အခု ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုယ်စားလှယ်အဖြင့် ခန့်အပ်ခံရပြီးဆိုတော့ ပထမဆုံး ဘာစပြီးလုပ်မယ်စီစဉ်ထားသလဲ။
ကိုထင်လင်းအောင် ။.။ ကျနော်တွေးထားတာကတော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ CDM ပါလာဖို့ပေါ့နော်။ ဘယ်သူတွေစည်းရုံးသလဲဆိုရင် ဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ သံရုံးတွေ နောက်တခါ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေ သူတို့တွေကို စပြီးတော့ စကားပြောသွားမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သူတို့တွေက CDM လုပ်ချင်နေကြပါတယ်။ လုပ်မယ်လို့လည်း အသံကြားထားပါတယ်။ မြန်မာ သံရုံးတွေကိုပြောတာပါ။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ ကိုထင်လင်းအောင် စပြီးတော့ သူတို့နဲ့ ထိစပ်ထားပြီးပြီလား
ကိုထင်လင်းအောင် ။ ။ စပြီးတော့ မထိစပ်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ရဲ့ မိတ်ဆွေတွေဆီက ကြားသိထားတာတွေ ကို အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်ချည်းကပ်မှာပါ။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။. ။ နောက်တခုက ဒေါက်တာဆာဆာ ကိုကြတော့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ အထူးသံတမန်အဖြင့် CRPH က ခန့်အပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ ဒေါက်တာဆာဆာ နဲ့ကော ကိုထင်လင်းအောင် အဆက်သွယ်ရပါပြီလား။
ကိုထင်လင်းအောင် ။. ။ မရသေးပါဘူး။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။. ။ ဒေါက်တာ ဆာဆာ ကကော အခုလောလောဆယ် ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာသိလား။
ကိုထင်လင်းအောင် ။. ။ အဲဒါလည်းကျနော်မသိဘူး။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။ ။ အခုမှ ကိုထင်လင်းအောင် လုပ်ငန်းတွေစရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲလို့ ခန့်မှန်းထားတာရှိလား။
ကိုထင်လင်းအောင် ။. ။ ဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုလိုရှိရင် ကျနော်တို့က နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ ပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ CRPH ကို လက်ခံပြီးပြီ။ လက်ခံတယ် အသိမှတ်ပြုတယ် ဆိုတာကို သူတို့က ပြောနေပြီ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့က အဲဒါကို တကယ့်ကို Legitimate ဖြစ်လာပြီးတော့ သူတို့ သံရေးတမန်ရေးအရပါ လက်ခံလာတဲ့အထိ ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ အဲဒီအခက်ခဲလေးတွေရှိတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။. ။ ကိုထင်လင်းအောင် ကြိုးစားပြီးတော့ နိုင်ငံတကာထောက်ခံမှု ဘယ်လောက်အထိ အားကောင်းမောင်းသန်ရလာလိမ့်မယ်လို့ကော မျှော်လင့်ထားပါသလဲ။
ကိုထင်လင်းအောင် ။ ။ အဲဒါကိုတော့ ကျနော်က တော်တော်လေး မျှော်လင့်ထားတယ်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ UNSecurity Council မှာ သူတို့လုပ်သွားတဲ့အစည်းဝေးတွေအရရော ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအရရော ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လုပ်သွားတဲ့ ၄၇နိုင်ငံအစည်းမှာရော အကုန်လုံးက လူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ Mandate ရထားတဲ့ အစိုးရဖက်မှာ သူတို့ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့တွေ့နေရတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲဒါတွေကြေညာနေတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ကမ္ဘာ့အင်အားအကြီးဆုံး အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမ္မတသစ် ဂျိုးဘိုင်ဒန် ကလည်း မြန်မာပြည်ကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ ခနခနပြောနေတယ်။ အဲတော့ ကျနော်တို့က တော်တော်လေးကို အားတက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
ကိုကျော်ကျော်သိန်း ။.။ အမေရိကန် သမ္မတကလည်း မြန်မာပြည်အရေးကိစ္စကို မပြတ်ပြောဆိုလာတယ်ဆိုတော့ ကိုထင်လင်းအောင် ရဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးရုံးကလည်းပဲ ထုတ်ပြန်ချက်အရ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အခုကျနော်တို့ရှိနေတဲ့ မေရီလန်းပြည်နယ်မှာ ရုံးအခြေစိုက်ပြီးဖွင့်မယ်ဆိုတော့ ကျနော်နားလည်တာက အမေရိကန်ကို အခြေစိုက်တယ် အမေရိကန်အစိုးရကိုလည်း အဓိက မြန်မာ့အရေးပေါက်လာအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ ကိုထင်လင်းအောင် အမေရိကန်အစိုးရကို ထိစပ်ထားပါပြီလား၊ ဘယ်လောက်အထိတိုးပေါက်နိုင်ပါမလဲ။
ကိုထင်လင်းအောင် ။. ။ ကျနော်တို့ ထိစပ်နိုင်အောင် ဒီမနက်ပဲ Contact ၂ ခု ၃ ခုလောက် ကျနော်ရထားပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်က ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာလလည်းဖြစ်နေတော့ ဒီမှာလည်းပဲ ရုံးတွေက အကုန်လုံးက Remote ပဲလုပ်နေကြတယ်။ ပြီးလို့ရှိရင် Tele working ပဲလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ထင်သလောက်မပေါက်တာတွေရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုလိုမျိုး Zoom Meeting နဲ့ သော်လည်ကောင်း Phone သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်လို့ရလာမယ့်အနေအထားတွေကို ကျနော်တွေ့နေရပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီရဲ့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကိုယ်စားလှယ် ဦးထင်လင်းအောင်ကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။ ဒီဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အပြည့်အစုံကို ဒီကနေ့ည ၇ နာရီမှာ ထုတ်လွှင့်မယ့် ဗွီအိုအေ တီဗီသတင်းလွှာနဲ့ ည ၉ နာရီမှာထုတ်လွှင့်မယ့် ရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာ စောင့်မျှော် ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုကြျောကြျောသိနျး ။ ။ ကိုထငျလငျးအောငျ အခု ပွညျထောငျစုလှတျတျောကိုယျစားပွုကျောမတီ CRPH ရဲ့ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးကိုယျစားလှယျအဖွငျ့ ခနျ့အပျခံရပွီးဆိုတော့ ပထမဆုံး ဘာစပွီးလုပျမယျစီစဉျထားသလဲ။
ကိုထငျလငျးအောငျ ။. ။ ကနြျောတှေးထားတာကတော့ ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ CDM ပါလာဖို့ပေါ့နျော။ ဘယျသူတှစေညျးရုံးသလဲဆိုရငျ ဒီနိုငျငံမှာရှိနတေဲ့ သံရုံးတှေ နောကျတခါ ကုလသမဂ်ဂကိုယျစားလှယျတှေ သူတို့တှကေို စပွီးတော့ စကားပွောသှားမယျလို့ ရညျရှယျထားပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ သူတို့တှကေ CDM လုပျခငျြနကွေပါတယျ။ လုပျမယျလို့လညျး အသံကွားထားပါတယျ။ မွနျမာ သံရုံးတှကေိုပွောတာပါ။
ကိုကြျောကြျောသိနျး ။ ။ ကိုထငျလငျးအောငျ စပွီးတော့ သူတို့နဲ့ ထိစပျထားပွီးပွီလား
ကိုထငျလငျးအောငျ ။ ။ စပွီးတော့ မထိစပျရသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ကနြျောရဲ့ မိတျဆှတှေဆေီက ကွားသိထားတာတှေ ကို အခွခေံပွီးတော့ ကနြျောခညျြးကပျမှာပါ။
ကိုကြျောကြျောသိနျး ။. ။ နောကျတခုက ဒေါကျတာဆာဆာ ကိုကွတော့ ကုလသမဂ်ဂဆိုငျရာ အထူးသံတမနျအဖွငျ့ CRPH က ခနျ့အပျလိုကျပွီဆိုတော့ ဒေါကျတာဆာဆာ နဲ့ကော ကိုထငျလငျးအောငျ အဆကျသှယျရပါပွီလား။
ကိုထငျလငျးအောငျ ။. ။ မရသေးပါဘူး။
ကိုကြျောကြျောသိနျး ။. ။ ဒေါကျတာ ဆာဆာ ကကော အခုလောလောဆယျ ဘယျမှာရှိတယျဆိုတာသိလား။
ကိုထငျလငျးအောငျ ။. ။ အဲဒါလညျးကနြျောမသိဘူး။
ကိုကြျောကြျောသိနျး ။ ။ အခုမှ ကိုထငျလငျးအောငျ လုပျငနျးတှစေရမယျဆိုတော့ ဘယျလိုအခွအေနတှေနေဲ့ ရငျဆိုငျရမလဲလို့ ခနျ့မှနျးထားတာရှိလား။
ကိုထငျလငျးအောငျ ။. ။ ဘယျလိုအခွအေနနေဲ့ ရငျဆိုငျရမလဲဆိုလိုရှိရငျ ကနြျောတို့က နိုငျငံတကာကနပွေီးတော့ ပွညျသူကရှေးခယျြတငျမွှောကျထားတဲ့ ကိုယျစားလှယျတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ CRPH ကို လကျခံပွီးပွီ။ လကျခံတယျ အသိမှတျပွုတယျ ဆိုတာကို သူတို့က ပွောနပွေီ။ ဒါပမေဲ့ ကနြျောတို့က အဲဒါကို တကယျ့ကို Legitimate ဖွဈလာပွီးတော့ သူတို့ သံရေးတမနျရေးအရပါ လကျခံလာတဲ့အထိ ကွိုးစားရမယျဆိုတဲ့ အဲဒီအခကျခဲလေးတှရှေိတယျ။
ကိုကြျောကြျောသိနျး ။. ။ ကိုထငျလငျးအောငျ ကွိုးစားပွီးတော့ နိုငျငံတကာထောကျခံမှု ဘယျလောကျအထိ အားကောငျးမောငျးသနျရလာလိမျ့မယျလို့ကော မြှျောလငျ့ထားပါသလဲ။
ကိုထငျလငျးအောငျ ။ ။ အဲဒါကိုတော့ ကနြျောက တျောတျောလေး မြှျောလငျ့ထားတယျဗြ။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ UNSecurity Council မှာ သူတို့လုပျသှားတဲ့အစညျးဝေးတှအေရရော ၊ ဆုံးဖွတျခကျြတှအေရရော ပွီးလို့ရှိရငျနောကျထပျလုပျသှားတဲ့ ၄၇နိုငျငံအစညျးမှာရော အကုနျလုံးက လူထုကရှေးခယျြတငျမွှောကျထားတဲ့ Mandate ရထားတဲ့ အစိုးရဖကျမှာ သူတို့ရှိနတေယျဆိုတာ ကနြျောတို့တှနေ့ရေတယျ။ သူတို့ကိုယျတိုငျကလညျး အဲဒါတှကွေညောနတေယျ။ ဒီကွားထဲမှာ ကမ်ဘာ့အငျအားအကွီးဆုံး အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ သမ်မတသဈ ဂြိုးဘိုငျဒနျ ကလညျး မွနျမာပွညျကို မကျြခွမေပွတျစောငျ့ကွညျ့နတေယျဆိုတာ ခနခနပွောနတေယျ။ အဲတော့ ကနြျောတို့က တျောတျောလေးကို အားတကျဖို့ကောငျးပါတယျ။
ကိုကြျောကြျောသိနျး ။. ။ အမရေိကနျ သမ်မတကလညျး မွနျမာပွညျအရေးကိစ်စကို မပွတျပွောဆိုလာတယျဆိုတော့ ကိုထငျလငျးအောငျ ရဲ့ နိုငျငံတကာ ဆကျဆံရေးရုံးကလညျးပဲ ထုတျပွနျခကျြအရ အမရေိကနျပွညျထောငျစု အခုကနြျောတို့ရှိနတေဲ့ မရေီလနျးပွညျနယျမှာ ရုံးအခွစေိုကျပွီးဖှငျ့မယျဆိုတော့ ကနြျောနားလညျတာက အမရေိကနျကို အခွစေိုကျတယျ အမရေိကနျအစိုးရကိုလညျး အဓိက မွနျမာ့အရေးပေါကျလာအောငျပွောမယျဆိုတော့ ကိုထငျလငျးအောငျ အမရေိကနျအစိုးရကို ထိစပျထားပါပွီလား၊ ဘယျလောကျအထိတိုးပေါကျနိုငျပါမလဲ။
ကိုထငျလငျးအောငျ ။. ။ ကနြျောတို့ ထိစပျနိုငျအောငျ ဒီမနကျပဲ Contact ၂ ခု ၃ ခုလောကျ ကနြျောရထားပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ အခုခြိနျက ကိုဗဈကပျရောဂါ ကာလလညျးဖွဈနတေော့ ဒီမှာလညျးပဲ ရုံးတှကေ အကုနျလုံးက Remote ပဲလုပျနကွေတယျ။ ပွီးလို့ရှိရငျ Tele working ပဲလုပျနကွေတယျဆိုတော့ ကနြျောတို့အနနေဲ့ ထငျသလောကျမပေါကျတာတှရှေိကောငျးရှိလာနိုငျတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုလိုမြိုး Zoom Meeting နဲ့ သျောလညျကောငျး Phone သျောလညျးကောငျး ဆကျသှယျလို့ရလာမယျ့အနအေထားတှကေို ကနြျောတှနေ့ရေပါတယျ။
ပွညျထောငျစုလှတျတျောကိုယျစားပွုကျောမတီရဲ့ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးကိုယျစားလှယျ ဦးထငျလငျးအောငျကို ကိုကြျောကြျောသိနျးက ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့တာပါ။ ဒီဆကျသှယျမေးမွနျးခကျြအပွညျ့အစုံကို ဒီကနညေ့ ၇ နာရီမှာ ထုတျလှငျ့မယျ့ ဗှီအိုအေ တီဗီသတငျးလှာနဲ့ ည ၉ နာရီမှာထုတျလှငျ့မယျ့ ရဒေီယိုအစီအစဉျမှာ စောငျ့မေြျှာ ကွညျ့ရှုနားဆငျနိုငျပါတယျ။